Chikwata chema Warriors chabudirira kuenderera mberi negadziriro yacho yemutambo wacho neDemocratic Republic of the Congo mugadziriro yachaita neMugovera manheru.
Vakomana ava vapinda munhandare iyi nenguva dzechinomwe manheru eMugovera, vachikusvidzirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muCairo.
Kunyange hazvo pakamboita mitauro yekusabhadharwa kwevatambi ava vachiti vacharamwa kutamba kana vasina kupihwa mari dzavo, vari kuziva zviri kuitika vaudza Studio7 kuti chikwata chemaWarriors chiri munhaurirano nevakuru veZifa panguva iyo vanenge vachigadzirira mutambo wavo wakakosha neDemocratic Republic of the Congo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumutungamiri weZifa, VaFelton Kamambo, sezvo tatadza kuvabata parunhare rwavo kuCairo kwavari.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muCairo, Va Christopher Mahupa, vati ichokwadi kuti vakomana vemaWarriors vaita gadziriro yavo vari munhandare yeNadi Sikha Al Hadid muCairo makare.
VaMahupa vati vachaenda kunotsigira chikwata chavo apo chichatamba neDRC neSvondo.
VaMahupa vaudza Studio7 kuti maWarriors anofanirwa kukunda zvine mutsindo kuitira kuti awane mukana wekupinda pazvikwata zvachaenda pachinzvimbo chechitatu zvinobvumidzwa kuenderera mberi nemakwikwi aya kuAfcon.
Zimbabwe yakakundwa neEgypt 1-0 mumutambo wakaparura makwikwi e2019 Afcon. Mushure mezvo, yakaita mangange neUganda 1-1.
Ukuwo Uganda yakarova DRC 2-0, iyo yakakundwa zvakare neEgypt 2-0.
Pari zvino Egypt ndiyo iri pamusoro petafura yezvikwata zviri muGroup A iine mapoinzi matanhatu, ichiteverwa neUganda, iyo ine mapoinzi mana, Zimbabwe iri pachinhambo chetatu iine poindi imwe chete, kozoti DRC iyo iri pasi petafura isina kana poindi zvayo.
Hurukuro naVaChristopher Mahupa